सिटौलाले किन गरे राजनीति छोड्ने कुरा ? – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण ६ सोमबार, ०७:४२
सिटौलाले किन गरे राजनीति छोड्ने कुरा ?
२०७६ असार ९ गते प्रकाशित, l १८:१५
काठमाडौं, ९ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ६५ वर्ष उमेर कटेका नेताहरूले पार्टीबाट नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा भएको देशको परिस्थिति र नेपाली कांग्रेसको भूमिका विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘युवा साथीहरूले विचार र संगठनले हामीलाई जित्नुहोस्।’ युवालाई पार्टीको नेतृत्वमा पुर्‍याउन ६५ कटेका नेताले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीलाई संगठित र एकतावद्ध पार्टीका रूपमा पुर्‍याउन उनले आग्रह गरे।
उनले भने,‘६५ नाघेका हामीजस्ताले पार्टी नेतृत्व युवालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । सत्ता गलत बाटोमा हिँडिराखेको छ। कांग्रेस कमजोर बाटोमा छ । सच्चिएर गएनन् भने यी दुवै राज्यका हितमा हुँदैनन्।’ देशको राजनीति पछिल्लो समय समाजवाद उन्मुखभन्दा राजनीतिक हिसाबले दुर्घटना उन्मुख रहेको उनले बताए।
उनले पछिल्लो समय सरकारले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै आएको पनि आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले गल्ती गरेको छ। संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गरेको छ। पूर्ण स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप तर्साएर राखेको छ।’
२०७६ असार ९ गते सम्पादित l १८:१८
सिटौलाको दाबी : ओली सरकार ढल्दैन
काङ्ग्रेसले बेथिति, अहंकार र घमण्डलाई फाल्नुपर्छः नेता सिटौला
श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छः नेता सिटौला
सरकारले संवैधानिक कानूनी प्रावधान नाघ्यो: नेता सिटौला